Ka azụmahịa gị na-apụta na ndị otu ahịa, ị ga-ahụ na ọchụchọ maka ọdịnaya bara uru na-aghọ ihe dị mkpa n'abalị. Ndi otu ahia na acho akwukwo ocha, ihe omumu, akwukwo ngwugwu, ihe nlere na ngwa ahia… ma ha choro ha ka ulo oru ha, ndi ntozu ahia, na ndi ahia
Jide n'aka na-lelee Ngosipụta Remote Na-ere Akụrụngwa Hub. Showpad wuru Hub iji nyere ndị otu aka ịgbanwere ụdị dịpụrụ adịpụ. Ọ bụ kpam kpam free na-agụnye a video usoro si Mmeri Site Nhazi, blog posts na ire, nchịkwa, onboarding, yana ndụmọdụ site n'aka ndị ọkachamara Showpad.
Meziwanye arụmọrụ ahịa site na iji akpaghị aka jikwaa njikwa akụ na njikwa arụmọrụ nke ihe ngosi, ma ọ bụ mepụta ngwa dị egwu na usoro nyocha site na iji Showpad's API siri ike na SDK. Mmekọrịta, Gụnyere:
Tags: aiakaebe njikọ akagoogle ụlọgsuiteahịaIhe omimi Microsoftelele microsoftije ozigbonchịkọta ahịanyocha ahịaịnye ọzụzọ ahịaọdịnaya ahịaNkwado ire ahịaihe omuma ahiammesiri irearụmọrụ arụmọrụomume ire ereihe ngosi erereọzụzụ ahịasapihe ngosi